Gaazexaa Bariisaa - Wikipedia
Bariisaan gaazexaa Afaan Oromoo kan jalqabaa yoo ta'u guddina Afaan Oromootiif gumaacha guddaa godhe. Gaazexaan kana seenaa ogbarruu Oromoo keessatti kan adda isa godhu bvarreeffama eeyyama mootummaa ergatee maxxanfame kan jalqabaa ta'u isaati.
Hundeeffama[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Bariisan kan hundeeffame sirni fiwudaalaa Hayilasillaasee kufee Dargiin erga dhaabbatee waggaa tokko booda Fulbaana 11, 1975tti ture. Gaazexaa Bariisaa kan hundeesse, kanarraas ka'ee Abbaa Bariisaa jedhamuun kan beekkamu, Mahdii Haamid Muudee ture. Namoonni isaan wajjin hirmaachaa turan kan jiran yoo ta'u isaan keessaa muraasni Lammeessaa Booruu, Kuwee Kumsaa, Ibraahim Hajii Alii fi Immiruu Angoosee faati. 
Bariisaan jalqabarratti hanga gaazexaa 20,000 maxxansiisun raabsaa ture. Maallaqni ittiin gaazexaan kuni maxxanfamu namoota dhuunfarraa kan walitti qabamu ture. Sochii gaazexaa kanaatti kan hin gammadne mootummaan Dargii, Gurraandhala 1, 1977 gaazexaa kana dhaaludhaan harka mootummaa galche. Gaazexaa kun Dargiidhan sababni inni dhaalame waan lama. Tokkoffaa maallaqa gaazexaan kun ittiin maxxanfamu sabboontota Oromoorraa kan funaanan qopheessitoota gaazexaa kanaa waan ta'eef yoo ta'u kan lammattaa ammoo qopheessitoonni gaazexaa kanaa Agarsiisa Aadaa fi Sirboota Oromoo 1977 waan qopheessaniif sana haaloo ba'uuf ture. Erga Dargiin dhaallamee booda maxxansaan gaazexaa kana gadi bu'uudhan 5,000 qofa maxxanfamee rabfamaa ture. 
Gaazexaan kun yeroo jalqabaa Qubee Saabatiin maxxanfamaa kan ture yoo ta'u 1991 as garuu Qubee Laatiniitin maxxanfama.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaazexaa_Bariisaa&oldid=30561" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 10 Caamsaa 2018, sa'aa 18:04 irratti.